Qorshayaasha Faa'iidada Medicare - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Waxaan haynaa qorshayaal ka bilaabanaya $ 0
Qorshayaasheena Faa'iidada Medicare waxaa loogu talagalay iyada oo maskaxda lagu hayo baahiyahaaga. Daryeelka ugu dhow guriga kula hel bixiyeyaasha u muuqda inay qoys yihiin. Ku soo biir bulshadayada daryeelka caafimaadka.
BANNO BULSHADA HORE XUBIN
Taageero Shakhsiyeed si Aad Caafimaad Qaba Ugu Ahaato
Waxaan u sameysanaa Medicare si ka duwan sidii hore - annaga oo u sharxeyna macluumaadka qorshaha ereyo fudud una soo bandhigeyna faa'iidooyin badan oo muhiim u ah xubnahayaga Taakulaynta caafimaadkaaga waa safar waxaanan kula soconaa tillaabo kasta oo aad qaaddo.
ISKA QOR MAANTA
Markay tahay waqtigii la iska qori lahaa Medicare, waxaa muhiim ah in loo diyaar garoobo. Hel caawimaad khabiir ah si aad isuqorto qorshe adiga kugu habboon. Baro sida aad xubin uga noqon karto.
Iyada oo ay jiraan ikhtiyaarro badan oo qorshe ah oo jira, sidee ku dooraneysaa midka saxda ah? Noo sheeg caymiska aad u baahan tahay waxaanan kugu waafajin doonnaa qorshe ku habboon baahidaada.
Haddii aad hesho Qaybta A iyo B ee Medicare ee asalka ah, markaa waad iska qori kartaa qorshaha Faa'iidada. Sidoo kale waad u qalmi kartaa haddii aad buuxiso shuruudo gaar ah.
Waxaan rabaa inaan amaano wakiilka wacyigelinta ee 'CHPW Medicare Advantage' Mario Sanchez, kaasoo iga caawiyey inaan fahmo sida si xikmad leh loo doorto Qorshaha Faa'iidada Medicare si aan ugu haboonaado baahiyaheyga. Mario wuu dulqaatay markii uu ka jawaabayay su'aalahayga, oo markuu gabi ahaanba hubin wax, halkii uu ka beddeli lahaa mawduuca, wuxuu sameeyay wicitaan si uu u caddeeyo arrinta. Bilooyin kadib markii aan wicitaanada u wacayay Medicare, Medicaid, oo aan ku aqrinayay waraaqda caymiska aan dhamaanayn, Mario dhab ahaantii wuxuu iga caawiyay inaan ogaado waxaas oo dhan.
Bukaan socod eegtada bukaan socodka ee Norma V.Neighborcare
WAX BADAN KA BARO QORSHEYADA FAA’IIDADA CAAFIMAAD
Ma haysaa su'aalo ku saabsan caymiska Medicare? Doorashada qorshaha saxda ah way adkaan kartaa. Waxaan halkan u nimid inaan kaa caawinno talaabo kasta oo aad qaadi karto, khadka tooska ah ama taleefoonka. Kooxdayada khabiirada Medicare waxay kaa caawin karaan inay kugu hagaan nidaamka xulashada qorshaha. Waxaan ku jirnaa tan!
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Oktoobar 23, 2019